Qiimaha Neymar Oo Hoos U Dhacay 100 Milyan Iyo Sababaha Ka Danbeeya Oo La Ogaaday | Laacib.net
Qiimaha Neymar Oo Hoos U Dhacay 100 Milyan Iyo Sababaha Ka Danbeeya Oo La Ogaaday
Neymar ayaa wararka isboortiga loogu soo qaadanayay sababo la xiriira habdhaqankiisa ka baxsan garoonka iyo dhaawacyadiisa marka loo eego qaab ciyaareedkiisa xilli ciyaareedyadii u danbeeyay.
Xiddiga reer Brazil ayaa la dagaalay ciyaaryahano ay isku koox yihiin, waxaa soo wajahay dhaawacyo xiriir ah waxaana dhawaan lagu eedeeyay kufsi.
Dhaawiciisii ugu danbeeyay ayaa keentay inuu seego tartanka Copa America ee bishaan ka bilaabanaya dalkiisa Brazil halka shirkadaha uu xayaysiinta u sameynayay ay ka fiirsanayaan heshiisyada ay kula jiraan.
Shirkada Mastercard ayaa durbab burisay qandaraaskii ay kula jirtay Neymar madaamaa kufsi lagu eedeeyay halka shirkadaha kale ee Nike iyo Red Bull iyagana la filayo inay war ka soo saaraan arinta Neymar.
Paris Saint-Germian ayaa ka walwalsan in qiimaha Neymar uu hoos uga dhacayo lacagtii 222 milyan euro ee ay kaga soo iibsadeen Barcelona sannadii 2017.
Sida ay sheegtay jariirada L’Equipe, Neymar ayaa ciyaaray kaliya boqolkiiba 51.8 kulamadii PSG ee tan iyo markii uu ku soo biiray, taasoo aad u hooseysa marka loo eego Lionel Messi (boqolkiiba 87) iyo Cristiano Ronaldo (boqolkiiba 77).
Shirkada sameysa daraasada kubada cagta ee CIES Football Observatory ayaa hoos u dhigtay qiimaha Neymar iyagoo bilowgii sannadkan 2019 ku qiimeynayay 213 milyan euro, waxaaana haatan oo bisha Juun lagu jiro ay ku qiimeynayaan lacag u dhaxeysa 120 ilaa 150 milyan euro.
Ka maqnaanshihiisa Copa America ayaa la micno ah inuu seegi doono 50ka xiddig ee ku tartamaya abaalmarinta Ballon d’Or sannadkan.
Si kastaba, shabakada Transfermarkrt ayaa weli ku qiimeyneysa Neymar 180 milyan euro waana qiimeyntii ugu sareysay ee ay abid siiyaan.